Soo saaraha waxyaabaha kaabayaasha fayoobaanta - Wisepowder BLOG
Hagaha Kama-dambaysta ah ee Alfa Lipoic Acid (ALA)
Alpha-lipoic Acid waxaa loola jeedaa iskudhafka dabiici ahaan u dhaca ee jirkeenu soo saaro. Xaruntan waxay ku shaqeysaa hawlo muhiim ah oo ku dhex jira jidhkeena heer unugyada. Shaqadeeda ugu weyn waxaa ka mid ah wax soo saarka [...]
Linoleic Acid (CLA) oo la Xakameeyay: Faa'iidooyinka, Qiyaasta, Waxyeellooyinka Dhinac
Waa maxay Isku-xirka Linoleic Acid (CLA)? Iskuxirka linoleic Acid (CLA) asal ahaan waa nooc dabiici ah oo polyunsaturated, omega-6 fatty acid. Ilaha cuntada ee ugu muhiimsan ee isku xiran linoleic acid waa hilib iyo [...]
5-ta Faa'iidadood ee Qaadashada Quful-tuurka Pyrroloquinoline (PQQ)
Waa maxay Pyrroloquinoline quinone (PQQ)? Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) waa molecule yar oo quinone ah oo leh fiitamiino u eg sida budada Dihexa (PNB-0408). Xarunta ayaa ah wakiil awood leh oo labalaabaysa [...]
10-ka Faa'iidooyin ee Liifta Orotate ee Caafimaadkaaga ah
Waa Maxay Lithium Orotate Lithium orotate waa xarun ka kooban bir alkali ah oo loo yaqaan 'lithium' taas oo ah maaddada firfircoon, iyo aashitada orotic oo u dhaqanta sidii [...]
Cycloastragenol (CAG): Faa'iidooyinka, Qiyaasta, Dhibaatooyinka Dhinacyada
1. Waa maxay Cycloastragenol (CAG) Cycloastragenol waa saponin dabiici ah oo laga soosaaray lagana sifeeyey xididka Astragalus membranaceus geedaha. Geedka loo yaqaan 'astragalus' waxaa loo adeegsaday dawo dhaqameedka Shiinaha [...]
Fiitamiinnada Longevity L-Ergothioneine (EGT) L-Ergothioneine (EGT) oo sidoo kale loo yaqaan "fitamiin cimri dheer". Faytamiinnada cimriga dheer waxaa loola jeedaa nafaqooyinka ay ka mid yihiin fiitamiinnada, macdanta iyo walxo kale oo fure u ah gabowga caafimaadka qaba. Liiska [...]
Waa maxay Palmitoylethanolamide (PEA)? Palmitoylethanolamide (PEA) oo sidoo kale loo yaqaan N-2 hydroxyethyl palmitamide ama Palmitoylethanolamine waa kiimiko ka tirsan koox amides acid dufan leh. Waa bayoolaji firfircoon, dabiici ahaan u dhaca [...]
Haddii aad ku jirto suuqa hormoonka hormoonka, hubaal waad la kulmi doontaa dheellitirka Dehydroepiandrosterone (DHEA). DHEA waxaa si dabiici ah loogu soo saaray jirkeena waxayna sameyn kartaa wax badan [...]
Cetilistat ee Daweynta Cayilnaanta: Dhammaan Waxyaabaha Aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Waa maxay Cetilistat Cetilistat, oo sidoo kale loo yaqaan magacyada caanka ah Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat waa daroogada miisaanka cusub ee miisaskeena. Waxaa soo saaray shirkadda Alizyme oo ka shaqaysa caafimaadka jirka [...]
Kahortagga Daawada Murugada leh: Tianeptine Sodium
Waa Maxay Tianeptine Sodium Tianeptine sodium waa daawo ay isticmaalaan dadka isticmaala si ay u maareeyaan niyad jabka. In kasta oo daroogada aan wali loo oggolaan in laga isticmaalo Maraykanka [...]
Phenibut daroogada anti-walaaca: Ma aaminbaa in la isticmaalo?
Dulmarka guud ee Phenibut Phenibut supplement wuxuu ka yimid Ruushka, halkaas oo loo isticmaalo in lagu yareeyo xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin hurdo la'aan, niyad jab, khalkhal ku yimaad feejignaan la'aan, xanuunada vestibular, walwal, tic iyo xiiq. Waa maxay [...]
Glucoraphanin Vs. Sulforaphane: Antioxidant-ka ugu fiican iyo Nafaqeeda ugu Weyn ee Broccoli laga soosaaray
Waa maxay Glucoraphanin? Glucoraphanin (21414-41-5) waa mid ka mid ah antioxidants-ka ugu xoogan, wax ku oolka ah, iyo muddada dheer soconaya oo ugu horreyn laga helo broccoli. Qaddarka cunsurkan wuxuu ku kala duwan yahay hal broccoli ilaa mid kale. Sida [...]